နည်းလမ်း ၁- ဆေးသောက်ခြင်း
( ၁ ) albendazole ဒြပ်ပေါင်းပါသောဆေး အယ်လ်ဘင်ဒါဇိုးလ် ဒြပ်ပေါင်းပါသောဆေးသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ရှိသော သံကောင် တုတ်ကောင်များ ကြီးထွားခြင်း ပွားများလာခြင်း တို့ကို ထိန်းချုပ်သည်သာမက ရှိပြီးသားအကောင်များကိုပါသေစေနိုင်သည် ။ များသောအားဖြင့် ဆရာဝန်က လုံးဝကင်းစင်စေရန် နှင့် ပြန်မကူးစက်စေရန် ထိုဆေးအားတနှစ်ခန့် ပေးတတ်သည် ။ အစာနှင့် တွဲဘက်စားသင့်သည် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နာတာရှည်ရောဂါသယ်များ သွေးအားနည်းသူများ မသောက်သင့်ပါ ။ ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသောက်ပါ ။
( ၂ ) pyrantel pamoate. တုတ်ကောင်များနှင့် သံချိတ်ကောင်များအတွက်အဓိကထားသုံးသည် ။တုတ်ကောင် သံချိတ်ကောင်တို့၏ အာရုံစနစ်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး သေဆုံးစေသည် ။သေဆုံးသွားပါက မစင်မှ တဆင့် အခက်ခဲမရှိကျဆင်းသွားနိုင်သည် ။ တလုံးထဲသာသောက်ရသောဆေးမျိုးဖြစ်သည် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်နဲ့ အသည်းမကောင်းသူများ မသောက်သင့်ပါ ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာသောက်သင့်သည် ။
( ၃ ) mebendazole . မီဘင်ဒါဇိုးလ်သည် သံကောင်အကြီး သံချိတ်ကောင် တုတ်ကောင်နှင့် သံပြားကောင် တို့အတွက် သောက်သုံးသည် ။ နောက်ထပ် ကူးစက်မခံရအောင်လဲ ကာကွယ်ပေးသည် ။ ဝါးစားနိုင်သောဆေးပြားပုံစံဖြစ်သည် ။ တနေ့နှစ်ခါနှင့် ၃ရက်သောက်နိုင်သည် ။ တလုံးထဲသောက်ရသော ဆေးလည်းရှိသည် ။မီဘင်ဒါဇိုးလ်အား ဓာတ်မတည့်သောရောဂါရှိပါက ဆရဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ ။ အစာအိမ်နာနှင့် အသည်းမကောင်းပါက ဆရာဝန်အားပြောပြပါ ။ ကိုယ်ဝန်သည်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ မသောက်သင့်ပါ ။ side effect အနေနှင့် ဘိုက်နာခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းများရှိနိုင်သည် ။
( ၄ ) niclosamide. နစ်ကလိုဆာမိုက် သည် သံပြားကောင်အပုမျိုး အမဲသား ဝက်သား ငါးစသည့် အသားများကြားတွင်ပါတတ်သော သံပြားကောင်များအတွက် ဖော်စပ်ထားသည် ။ မစင်မှတဆင့် အသေကောင်များ အလွယ်တကူထွက်သွားနိုင်သည် ။ တုတ်ကောင်နှင့် သံကောင်ကြီးများ မသေပေ ။
နည်းလမ်း ၂ သဘာဝ အသီးအနှံများဖြင့် သံချနည်း
( ၁ ) သင်္ဘောသီးအစေ့စားခြင်း . သင်္ဘောသီးအစေ့တွင်ပါဝင်သော carpaine, benzylisothiocyanate, benzylglucosinolate, glucotropacolin, benzylthiourea, hentriacontane, sitosterol, caricin နှင့် enzyme တမျိုးဖြစ်သော myrosin ဓာတ်အားလုံးတို့က ကပ်ပါးကောင် သံကောင် တုတ်ကောင်ဟူသမျှကို သေစေနိုင်သည် ။ အူတွင် ကပ်ပါးကောင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော ယောင်ယမ်းခြင်းကိုပါ သက်သာစေသည် ။
အစေ့လိုက် စားသုံးခြင်း သို့မဟုတ် မှုန့်ညက်အောင်ထောင်းပြီးဒိန်ချဉ် ပျားရည်ဖြင့်ရောကာ စားသုံးနိုင်သည် ။
( ၂ ) နာနတ်သီးအား အမြဲတစေ စားသုံးပေးခြင်း. နာနတ်သီးတွင်ပါဝင်သော အစာခြေအင်ဇိုင်းဓာတ် တမျိုးဖြစ်သည့် ဘရိုမီလင် bromelain သည် အထူသဖြင့် သံပြားကောင်များနှင့် ၄င်းမှထွက်ရှိသော ဖရီရက်ဒီကယ် အညစ်အကြေးများကိုရှင်းလင်းပေးသည် ။ နာနတ်သီးတွင်ပါဝင်သော အက်ဆစ်ဓာတ်တမျိုး က သံကောင်များကြိုက်နှစ်သက်သော ဂလူးကိုစ်သကြားကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် သံကောင်များ အစာငတ်ပြီးသေစေနိုင်သည် ။
( ၃ ) ငှက်ပျောသီးနှင့် သံပုရာရည်ရောစားပါ . ငှက်ပျောသီးတလုံးကိုချေပြီး သံပုရာရည် တဇွန်းဖြင့်ရောစားပါ ။ ငှက်ပျောသီးက သဘာဝဝမ်းပျော့ဆေးဖြစ်ပြီး သံကောင်များကိုဖယ်ရှားစေသည် ။ ငှက်ပျောသီးတွင်ပါဝင်သော အော်လီဂိုစက်ချရိုက်စ် oligosaccharides အူများလှုပ်ရှားမှုကို စွမ်းဆောင်စေပြီး သံပုရာသီးတွင်ပါဝင်သော သဘာဝပိုးသတ်ဆေး antibacterial နှင့် antiprotozoal တို့ကသံကောင်များကိုသေစေသည် ။
( ၄) သလဲသီးကိုဖျော်ရည်လုပ်သောက်ခြင်း . တနေ့ကို သလဲသီးဖျော်ရည် ၅ခွက်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သံကောင်တုတ်ကောင်များကို သေစေသည် ။.
( ၅ ) ဖယုံသီး အစေ့ စားသုံးခြင်း . ဖယုံသီးအစေ့တွင် ကူကာဘီတာစင် cucurbitacins ဟုခေါ်သည်ဒြပ်ပေါင်းသည် သံကောင်များ၏ အာရုံစနစ်ကို တုိုက်ဖျက်ပြီး မလှုပ်မယှက်ဖြစ်စေသည် ။ မျိုးပွားခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်သည် ။ ဖယုံစေ့တွင် အခြားဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော flavonoids, palmitic, oleic နှင့် linoleic acids တို့ကလဲ သံကောင် တုတ်ကောင်များကိုသေစေသည် ။ တနေ့လျှင် ဖယုံစေ့ ၁၀ စေ့မှ ၁၅စေ့ အထိ စားသုံးသင့်သည်
( ၆ ) ကြက်ဆူဆီ တနေ့လျင် တစ်ဇွန်း မှ နှစ်ဇွန်းအထိ သောက်ပေးခြင်း . ကြက်ဆူဆီသောက်သုံးလိုလျင် အစာ မစားခင် အစာအိမ်တွင်း ဘာအစာမှ မရှိခင်သောက်သုံးသင့်သည် ။ တခါတရံ ကြက်ဆူဆီကြောင့် ဝမ်းသက်သောအခါ သံချိတ်ကောင်သည်အစာအိမ်နံရံကို ပိုမိုဆွဲကုတ်တွယ်တတ်သောကြောင့် ဘိုက်နာ တတ်သည် ။
( ၇ ) အခြားသော ပရဆေးများနှင့် အဆီများ .
ကြက်သွန်ဖြူ : လေ့လာချက်များ အရ တနေ့လျှင် ကြက်သွန်ဖြူ တစ်တက် နှစ်တက် နေ့စဉ်စားသုံးခြင်းဖြင့် ကပ်ပါးသံကောင်များကိုသေစေနိုင်သည် ။ ကြက်သွန်ဖြူတွင်ပါဝင်သော allicin, ဓာတ်သည်အင်တီဘိုင်အိုတစ် ပိုသတ်ဆေးတမျိုးဖြစ်သည် ။
အုန်းဆီ: အုန်းဆီတွင် caprylic acid သည် ပိုးမွှားများကိုသေစေနိုင်သည် ။
( ၁ ) နနွင်းဆေးတောင့်. နနွင်းတွင်ပါဝင်သော ကာကူမင်ဟုခေါ်သော အာဟာရဓာတ်သည် ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော ဘတ်တီးရီးယားများ နှင့် အူထဲမှာရှိသော ကပ်ပါးသံကောင်တုတ်ကောင် များကို ရှင်းလင်းပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်စေသည် ။ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ရှိဆေးတောင့်ကို တနေ့နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးနိုင်ပါသည် ။
( ၂ ) uva ursi tablets . Uva ursi, or bearberry တွင်ပါဝင်သော arbutin ဟုခေါ်သော ဓာတ်သည် သံကောင်များခိုအောင်းနေရာများ ရှိဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည် ။ သံကောင်များကိုလည်းသေစေနိုင်သည် ။ တနေ့လျင် ၈၀၀ မီလီဂရမ် အစာနှင့်တွဲပြီးစားသုံးနိုင်သည် ။
( ၃ ) vitaklenz capsules. Vitaklenz ဗိတာကလင်းစ် ဟုခေါ်သော သဘာဝ ပရဆေး ၁၂မျိုးဖြင့် ဖော်စပ်ထားသော ဆေးမျိုးဖြစ်သည် ။ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သည် ။ အူများကိုသန့်စင်စေသည် ။ တနေ့သုံးကြိမ်သောက်သုံးနိုင်သည် ။
သံကောင်တုတ်ကောင် ရှိမရှိ သိနိုင်သောနည်းလမ်းများ
ဝမ်းဘိုက်တွင်ယားယံခြင်းကို ဂရုပြုပါ . သံကောင်တုတ်ကောင်တွယ်ကပ်ခံရပြီဆိုလျင် သာမာန်မဟုတ်ပဲ ဝမ်းဘိုက် အရေပြားယားယံတတ်သည် ။ သံကောင်များမှ ထုတ်လွှတ်သော အညစ်အကြေးများ အဆိတ်အတောက်များအား ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ခုခံအားစနစ်က တိုက်ခိုက်သောအခါ ဖြစ်သော ယားယံခြင်းဖြစ်သည် ။
ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော အကွက်များ. သံကောင်များ တုတ်ကောင်များကို ခုခံစနစ်က တိုက်ခိုက်သောအခါထွက်လာသော နီရဲ ယားယံသည့် အကွက်များ ။
ဘိုက်နာခြင်း .အချို့သော သံကောင်တုတ်ကောင်များက အူလမ်းကြောင်းတွင်ပိတ်ဆို့နေတတ်သည် ။ အချို့သံကောင်များကြောင့် အူအတွင်းနံရံများ အနာဖြစ်နေတတ်သောကြောင့် ဘိုက်အလွန်နာခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည် ။ သံကောင်အကြီးများ သံပြားကောင်များ နှင့် သံချိတ်ကောင်များကြောင့် ဖြစ်တတ်သည် ။
ရုတ်တရက် ဝိတ်ကျသွားခြင်း .သံကောင်တုတ်ကောင်ရှိနေပြီဆိုလျင် ဝိတ်လျှော့စရာမလိုပဲ ဝိတ်ရုတ်တရက်ကျသွားတတ်သည် ။ သံကောင်များက မိမိ၏အာဟာရများကို စားသုံးလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ စားသုံးလိုက်သော အာဟာရများသည် မိမိထံမရောက်ပဲ သံကောင်များထံရောက်သွားသည် ။
ချောင်းဟပ်ခြင်း ချောင်းဆုိုးခြင်း သံကောင်အကြီးများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အူတွင်းမှ ရင်ညွန့်အထိ လှည့်လည်သွားတတ်သောကြောင့် ၄င်းတို့ လှုပ်ရှားတိုင်း လည်ချောင်းယားယံခြင်း ချောင်ဆိုးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ။ သွားဘယ်လောက်တိုက်တိုက် ပါးစပ်နံခြင်းသည် သံကောင်များမှ စွန့်ထုတ်သော အညစ်အကြေးများ ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။
မစင်တွင် သွေးစရှိမရှိစစ်ဆေးပါ. သံချိတ်ကောင်များ အူတွင်းနံရံများကိုတွယ်ကပ်ချိတ်ထားခြင်းကြောင့် အူနံရံများ အနာတရာဖြစ်နေနိုင်သည် ။ သံချိတ်ကောင်များရွှေလျားခြင်းကြောင့် သွေးစထွက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ။ ထို့ကြောင့် မစင်တွင် အနီရောင် အမည်းရောင် များမြင်တွေ့ရနိုင်သည် ။
Posted by Kai at 4:08 PM
Labels: Health, ဘာသာပြန်, ဆေးနည်းတို
Nge January 26, 2015 at 8:39 PM
ဒီိပို့စ်လေးရေးပေးတာ ကျေးဇူး အရမ်းတင်တယ် <3 <3 <3
ဟိုတခါ သံချတာ အကောင်အကြီးကြီး ပါလာပီး နောက် ၀မ်းစစ်ပီး ဆေးသောက်ရတယ်။ အခု ကြောက်လွန်းလို့ ထပ်ချဖို့ လည်း ကြောက်နေတယ်။ နာနတ်သီး များများစားပီး ... ငှက်ပျောသီးနဲ့ သံပရာရည် ရောသောက်မယ် ... နနွင်းဆေးလုံးတွေလည်း သောက်မယ်။
Kai January 26, 2015 at 9:08 PM
ငယ် သဘောင်္သီး ခွဲစားတိုင်း အစေ့လေးတွေ မလွှင့်ပစ်ပဲ စုထား ခဏခဏ ထောင်းပြီး ဒိန်ချဉ်နဲ့ ရောစားပါလား အမလဲ အဲလို လုပ်မလို့ ညီမတယောက်က နည်းပြတာ
Kai January 26, 2015 at 9:07 PM
ငယ်ရေ အမလဲ နားထဲကယားသလုိုလို လည်ချောင်းထဲက ယားသလိုလို ဘိုက်က နာသလိုလို ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြရင် ပုံမှန်ရောဂါမျိုး မဟုတ်တဲ့ အတွက် မစမ်းပဲ ဆေးလုံးလေးတလုံးလောက်ပဲ ပေးလိုက်ရင် ရပါ့မလား ဟိုတခါသောက်တာ ၂လပဲရှိသေးတယ် ထပ်သောက်လို့ရပါ့မလားတို့ အမျိုးမျိုး တွေးပူနေတယ် ဂေါက်နေပြီ ထင်တယ်
Nge March 6, 2015 at 1:15 AM
လောလောဆယ်တော့ ဖူကာဂါ နဲ့ ဘုရားတပြီး ရှင်းလိုက်ပီ အမ ... တန်းလန်းတွေ ထွက်မလာတာ ဘုရားမတာပဲ :( :( :(